Gottfried Wilhelm Leibniz: taariikh nololeedka iyo waxyaalaha sayniska | Saadaasha Shabakadda
Boggan waxaan had iyo jeer uga hadlaynaa saynisyahannada ugu muhiimsan iyo waxay ku soo kordhiyeen adduunka sayniska. Si kastaba ha noqotee, falsafadayaashu sidoo kale waxay sameeyeen tabarucaad badan sida Leibniz. Waa falsafad magaciisa oo buuxa uu yahay Gottfried Wilhelm Leibniz wuxuu kaloo ahaa fiisikis iyo xisaab. Waxay saamayn muhiim ah ku yeelatay horumarinta sayniska casriga ah. Intaa waxaa sii dheer, isagu wuxuu ka mid yahay wakiillada dhaqanka caqliga ku dhisan ee casriga ah tan iyo markii aqoontiisa xisaabta iyo fiisikiska loo adeegsaday inuu awood u yeesho inuu sharraxaad ka bixiyo dhacdooyinka dabiiciga iyo aadanaha qaarkood.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato taariikh nololeedka Leibniz iyo waxyaabaha u soo qabsoomay.
1 Taariikh nololeedka Leibniz
2 Waxqabadka Leibniz iyo tabarucaadka
3 Xisaabinta aan xadidnayn ee xisaabta
4 Caqli gal
5 Falsafada Leibniz
Wuxuu ku dhashay July 1, 1646 magaalada Leipzig, Germany. Wuxuu ku koray qoys diineed Lutheran ah dhamaadka dagaalkii 30-ka sano. Dagaalkani wuxuu dalka oo dhan ka dhigay burbur. Tan iyo markii uu yaraa, markasta oo uu iskuul dhiganayay, wuxuu ahaa nooc iskiis wax u baray tan iyo markii uu awooday inuu waxyaabo badan kaligiis barto. Markuu jiray da'da 12, Leibniz wuxuu horey u bartay luuqada Latin-ka kaligiis. Sidoo kale, isla waqtigaas wuxuu baranayay Griiga. Awoodda waxbarashadu waxay ahayd mid aad u sareysa.
Horeba 1661 wuxuu bilaabay inuu ku tababaro qaybta sharciga ee Jaamacadda Leipzig halkaas oo uu si gaar ah u daneynayay raggii ka soo muuqday kacaankii ugu horreeyay ee saynis iyo falsafad ee Yurubta casriga ah. Raggaas oo nidaamka oo dhan kacaan ka sameeyay waxaa ka mid ahaa Galileo, Francis Bacon, René Descartes iyo Thomas Hobbes. Waxaa ka mid ahaa fikirkii xilligaa jiray qaar ka mid ah culimada iyo fikradaha Aristotle.
Markii uu dhamaystay barashadiisii ​​sharciga, dhowr sano ayuu ku qaatay magaalada Paris. Halkaan wuxuu ka bilaabay tababarka xisaabta iyo fiisigiska. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu awood u yeeshay inuu la kulmo faylosuufiyeyaashii ugu caansanaa iyo xisaabiyeyaashii waqtigaas wuxuuna si faahfaahsan u darsay dhammaan inta xiisaysa. Wuxuu la tababaray Christian Huygens oo ahaa tiir aasaasi ah si uu hadhow u horumariyo aragtida ku saabsan kalkulasyada kaladuwan iyo kuwa isku dhafan.
Wuxuu ku soo maray meelo kala duwan oo yurub ah isagoo la kulmay qaar ka mid ah falsafadayaasha ugu matalaya waqtigan. Safarkan kadib Yurub wuxuu ka aasaasay akadeemiyada cilmiga magaalada Berlin. Akadeemiyadani waxay lahayd qulqulatooyin tababarayaal ah oo doonayay inay wax badan ka ogaadaan sayniska. Sannadihii ugu dambeeyay noloshiisa waxaa lagu qaatay isku day ah in la soo uruuriyo muujinta ugu weyn ee falsafadiisa. Si kastaba ha noqotee, ujeedkani ma noqon mid guuleysta. Wuxuu ku dhintay Hanover bishii Nofeembar 1716.
Waxqabadka Leibniz iyo tabarucaadka
Waxaan arki doonnaa waxa ugu waaweyn iyo xaaladaha Leibniz adduunka sayniska iyo falsafada. Sida faylasuufyada kale iyo saynisyahannadii xilligaa jiray, Leibniz wuxuu ku takhasusay aagag kala duwan. Waa inaan maanka ku haynaa in waqtiyadan aan weli aqoon badan u lahayn dhammaan laamaha, sidaa darteed qof keligiis ah uu khabiir ku noqon karo dhowr meelood. Waqtigaan la joogo, waa inaad ku takhasustaa hal meel oo keliya xitaa haddii ay adag tahay in la ogaado dhammaan macluumaadka ku saabsan aaggaas. Xaqiiqduna waxay tahay in xaddiga macluumaadka jira iyo waxa lagu sii wadi karo in la baaro marka loo eego wixii markii hore jiray waxaa jira kala duwanaansho aad u xun.
Awoodda khabiiro ku takhasusay aagag kala duwan ayaa u ogolaaday isaga inuu dejiyo aragtiyo kala geddisan isla markaana aasaaska u dhigo horumarka casriga ah ee sayniska. Tusaalooyinka qaar waxay ahaayeen xisaabta iyo caqliga iyo sidoo kale falsafada. Waxaan u qeybineynaa waxa ugu badan ee ay tabarucaadku yihiin:
Xisaabinta aan xadidnayn ee xisaabta
Isaga iyo Isaac Newton, Leibniz waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay mid ka mid ah abuurayaasha kalkulas. Isticmaalkii ugu horreeyay ee kalkulasyada muhiimka ah waxaa lagu soo warramey sanadka 1675 iyo Waan u isticmaali lahaa si aan u helo aagga ku hoos yaal hawsha Y = X. Sidan oo kale, waxay soo saari kartaa ogeysiisyo qaarkood sida wareegga muhiimka ah ee S waxayna dhalisay Sharciga Leibniz, iyadoo si sax ah u ah xukunka sheyga kalkulasyada kaladuwan. Wuxuu sidoo kale gacan ka gaystay qeexida hay'adaha xisaabta ee kaladuwan ee aan ugu yeerno xayawaanada ugu yar iyo in la qeexo dhamaan sifooyinka aljebrada. Xilligaan waxaa jiray waxyaabo badan oo isdifaac ah oo ay ahayd in dib loo eego oo dib loo habeeyo qarnigii sagaal iyo tobnaad.
Waxaa loogu deeqay iyadoo lagu saleynayo epistemology iyo caqli gal. Wuxuu aaminay tababarkiisa xisaabta wuxuuna awooday inuu sifiican u difaaco in kakanaanta caqliga aadanaha loo tarjumi karo luuqada xisaabta. Marka xisaabintaas la fahmo, waxay si fiican u noqon kartaa xalka lagu xalliyo kala duwanaanshaha fikirka iyo doodaha u dhexeeya aadanaha. Sababtaas awgeed, waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay mid ka mid ah halgamayaasha ugu caansan xilligiisii, ilaa Aristotle.
Waxyaabaha kale, wuxuu awooday inuu sharaxo sifooyinka iyo habka kheyraadka luqadeed ee kaladuwan sida iskuxirka, diidmada, gogosha, ka mid noqoshada, aqoonsiga iyo gogol madhan, iyo kala goynta. Dhammaantood waxay ahaayeen kuwo waxtar leh inay awoodaan inay fahmaan oo ay sameeyaan sabab macquul ah iyo tixgelin midba midka kale oo aan ansax ahayn. Waxaas oo dhami waxay ka kooban yihiin mid ka mid ah wejiyada ugu muhiimsan ee horumarinta caqli-galinta epistemic iyo fikirka qaabaysan.
Falsafada Leibniz waxaa lagu soo koobay mabda'a shaqsiyeynta. Wuxuu ku sameeyay 1660-meeyadii wuxuuna difaacay jiritaanka qiime shaqsiyeed oo ka kooban guud ahaan naftiisa. Tani waa sababta oo ah waa suurtagal in la kala saaro setka. Tani waxay ahayd qaabkii ugu horreeyay ee loogu wajaho aragtida Jarmalka ee monads. Waa isbarbar dhig xagga fiisigiska ah oo lagu doodayo in monadsku yahay aagga maskaxda waxa atamadu ku yaalliin boqortooyada. Iyagu waa waxyaalaha ugu dambeeya ee koonkan iyo waxa siiya qaab la taaban karo oo loo maro sifooyinka guryaha sida kuwa soo socda.
Waxaas oo dhan waxaa lagu sheegay sida wakiil shakhsi ah oo caalamka laftiisa ah.
Sidaad u aragto, Leibniz wuxuu waxbadan kusoo kordhiyay adduunka sayniska iyo falsafadda. Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan uga baran karto Leibniz taariikh nololeedkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Taariikh nololeedka Leibniz